10 Toerana epic hitsidika an'i Sina | Save A Train
Home > Train Travel China > 10 Toerana epic hitsidika an'i Sina
Ny tanin'ny angano, Dynasties, kolontsaina, ary ireo olona manangana an'i Shina majika mahafinaritra, ny tranon'i 10 ankamaroan'ny toerana epic hitsidika an'i Shina. Mahavariana ny toerana rehetra, mitantara tantara taloha amin'ny vatokely rehetra, tetezana, sy rano madio an'ny 1000 farihy.
Ny manaraka 10 ankamaroan'ny toerana epic hitsidika an'i Shina, dia mpandehandeha nahagaga nandritra ny an'arivony taona maro, koa miomàna amin'izay dianao mandritra ny androm-piainana.
1. Toerana epic hitsidihana any Sina: Zhangye Danxia Landform
Tranga ara-jeolojika manaitra, ny Zhangye Danxia National Park any amin'ny faritanin'i Gansu no eo an-tampon'ny 10 ankamaroan'ny toerana epic hitsidika an'i Shina. In 2009, Ny "rahona mena" valan-javaboary Danxia dia nanjary vakoka manerantany UNESCO.
Ny valan-javaboary 50 kilometatra toradroa, miala sasatra eo am-pototry ny tandavan-tendrombohitra Qilian. izany fahagagana voajanahary nandany an'arivony taona maro vao namorona ny hatsarana izay manintona ireo mpandeha erak'izao tontolo izao. Ilay faritra izay ranomasimbe taloha, nanova tsikelikely ny endrika tanindrazany ho tampony sy lalana, manomboka amin'ny voasary ka hatramin'ny maintso, tsara tarehy mahatalanjona tokoa.
Ahoana no ahatongavako amin'ireo endrika any Danxia any Shina?
Afaka manidina mankany Zhangye avy any Lanzhou ianao afaka adiny iray, na raiso ny fomba fitsangatsanganana ara-tontolo iainana ny namana. Izy io ihany 6 ora lamasinina.
2. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Toeram-bary any Yuanyang
Raha mitady traikefa nahafinaritra ianao, avy eo dia miandry ny epic adventure 3,000 dingana amin'ny tanimbary Yuanyang. Hahita ireo tanimbary mahatalanjona ireo ianao any amin'ny faritanin'i Yunnan, any amin'ny tehezan-tendrombohitra Ailao. Ny vahoaka Hani mahavariana dia namorona ity toerana mahafinaritra ity 2,500 taona maro lasa izay.
‘Ilay mpanao sary sokitra mahay” namboarina a Izao tontolo izao UNESCO lova eo am-pelatanany, manamorona ny renirano Mena mihoatra ny 113 kilometatra toradroa. Ny volana novambra no iray amin'ireo fotoana tsara indrindra hitsidihana ireo toerana epic izay hitsidika an'i Sina.
Ahoana no ahatongavako amin'ny tanimbary Yuanyang?
voalohany, tokony ho tonga any Kunming tanàna ianao, ary avy eo amin'ny bus mankany Yuanyang. Fiaran-dalamby mankany Jianshui no fomba tsara indrindra handehanana, ary avy eo maka ny fiara fitateram-bahoaka mankany Yuanyang.
3. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Farihy Qinghai
Ilay farihy avo indrindra any Sina, Ny farihin'i Qinghai no toerana fahatelo epic hitsidika an'i Sina. Raha manapa-kevitra ny hitsidika ity farihy manaitra ity ianao, tokony ho fantatrao izany Lake Koko Nor, dia any avaratra atsinanan'ny lemaka Tibetana. Ary noho izany, Ny moanina Tibetana sy Tibetana dia mihevitra azy io ho masina.
Ho fanampin'io zava-misy io, ny tontolon'ny vanim-potoana miova, ataovy miavaka ny farihy Qinghai ary tsy toy ny toerana hafa any Shina. Afaka mitsidika ara-bakiteny ny Farihy Qinghai ianao amin'ny fahavaratra, fararano na lohataona, ary mahita farihy hafa tanteraka isaky ny mandeha.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny farihy Qinghai?
Voalohany, raiso ny lamasinina mankany Xining, ary avy eo afaka mandeha bus ianao na manofa fiara mankany amin'ny farihy Qinghai.
4. Zhangjiajie – Andry lava volo
Fananganana toy ny Andry, ilay valan-javaboary ala Zhangjiajie masiaka dia zava-mahatalanjona manaitra tampoka any Shina. Zhangjiajie dia tranokala famoronana sandstone iray tsy dia hitanao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ity toerana epic hitsidika an'i Shina ity dia manana mihoatra ny 200 tampon'isa, tilikambo, ary tendrombohitra vao miakatra avy amin'ny tany.
Ankoatry ny, sambatra ianao mahita olona vitsy an'isa telo monina amin'ity faritra lavitra ity, ary ireo karazana tandindomin-doza toa ny serfa rano sinoa sy salamander goavambe sinoa.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny Zhangjiajie Formations?
Raha mandeha any Beijing ianao, Shanghai, na Xian, avy eo maka lamasinina mankany Zhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Farihy Alpine miloko
Riandrano mahavariana, farihy, 9 Vohitra Tibetana, ary ny be indrindra tsara tarehy toerana manodidina, ataovy iray amin'ireo ny lohasaha Jiuzhaigou 10 toerana epic hitsidika an'i Sina. Hahita an'i Jiuzhaigou ianao eo amin'ny tandavan-tendrombohitra Min Shan, ary tena izy io a valan-javaboary.
Amin'ny haavon'ny 2,472 M. ho hitanao ny farihy voninkazo dimy. Tena mendrika ny dia io noho ireo loko tsy manam-paharoa, vokatry ny vatolampy travertine ambany farihy, and colorful algae. Ireo 2 ny zava-misy dia mamorona ny vokatry ny tampon'ny Alpine amin'ny tendrony sy rano manga-turquoise voahodidin'ny biby manaitra.
Ahoana no ahatongavako any Jiuzhaigou?
Mila mankany Chengdu ianao, ny renivohi-paritany Sichuan any atsimo andrefan'ny Sina amin'ny bus ary sidina.
6. Faritany Sichuan Andrefana – Valan-javaboary Daocheng Yading
Raha mikasa ny hitsoaka any amin'ny natiora tsara tarehy any Shina ianao, oram-panala tampon'isa, farihy madio, ary paradisa fitsangantsanganana, avy eo dia mety ho anao ny tahiry voajanahary Yading. Ho hitanao ity toerana epic ity any amin'ny faritanin'i Sichuan any Shina, ary aleonao manokana fotoana farafaharatsiny 2-3 andro, hahita ny zava-mahatalanjona rehetra.
Ny "Last Shangri-La" dia misy Chianrezig telo, Jambeyang, ary tendrombohitra Chanadorje, izay mamorona endrika telozoro, ary aiza no ahitanao ny fomba fijery tsara indrindra any Daocheng. Ary, tsara kokoa ianao ho vonona amin'ny 1,000 farihy, anisan'izany ny farihy "Ronono" Erong, ary ilay farihy Five Color Danzhen mahatalanjona ao 4,600 metatra.
Ahoana no ahatongavako any Daocheng Yading?
Raha fohy ara-potoana ianao, avy eo manidina amin'ny seranam-piaramanidina Yading, ary avy eo maka ny bus bus mankany Daocheng. Azonao atao koa ny mandray ny bus mankany Shangri-La, ary avy eo maka bisy fitsangatsanganana mankany Yading. Na izany aza, raha tena te hahita ity toerana epic ity any Shina ianao, avy eo mijanona ao Daocheng.
7. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Fenghuang, Faritanin'i Hunan
Fenghuang dia iray amin'ireo toerana nentim-paharazana eto amintsika 10 toerana epic hitsidika ao amin'ny lisitry ny China. Ity tanàna voatahiry tsara ity dia naorina tao amin'ny Tarana Qing ary nitahiry ny toetrany taloha sy ny fomba fijeriny hatramin'ny farany 300 taona.
Ary noho izany, rehefa miditra amin'ity tanàna mahafinaritra ity ianao, ho tsapanao fa mandeha ara-bakiteny ianao amin'ny lasa. Ny trano hazo ao an-tanàna, tetezana, ny tempoly tsy voakasiky ny fotoana ary miteraka rivo-piainana mahatalanjona na andro na alina.
Araka ny tantara, ny tanàna dia nahazo ny anarany "Phoenix" rehefa 2 Tsy te hiala i Phoenix satria tsara tarehy be, ka nijanona niambina azy ireo izy ireo.
Ahoana no ahatongavana any Fenghuang?
Tsy misy afa-tsy ny fiara fitateram-bahoaka mankany Fenghuang, tsy misy lamasinina. Afaka mandray bus ianao avy amin'ny tanàna akaiky any Hunan, toa an'i Changsha, ary Zhangjiajie.
8. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Ny Great Wall of China
Ny Great Wall of China dia iray amin'ireo zava-mahagaga eto an-tany, mazava ho azy fa manasongadina ny antsika izy io 10 ankamaroan'ny toerana epic hitsidika an'i Shina.
Ho an'ny mihoatra 2,300 taona maro ny Great Wall of China no manjaka ny tontolon'ny China Avaratra, ary io no mampiavaka ny dia rehetra mankany Sina. Indrisy, nandritra ny taona maro noho ny fikaohon-tany sy ny fahasimban'ny olombelona - 2,000 kilometatra no miala amin'ity mari-toerana miavaka.
Tokony homarihinao fa raha manonofinofy mandeha amin'ny rindrina iray manontolo ianao, handray anao izany 18 volana farafaharatsiny mba hamitana ny dian'ny Great Wall of China.
Ahoana no ahatongavako amin'ny rindrin'i Sina?
Afaka mandeha lamasinina avy any Beijing ka hatrany amin'ny gara gara Badaling ianao, ary avy eo maka ny fiara fitateram-bahoaka maimaim-poana mankany amin'ny biraon'ny tapakilan'i Badaling Great Wall.
9. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Farihy Qiandao
Miaraka mihoatra ny 1000 nosy, Ny farihy Qiandao dia iray amin'ireo toerana epic eto amin'izao tontolo izao, avelao ihany i Sina. Ho hitanao io farihy mahafinaritra be io any amin'ny firenena Chunan, Faritanin'i Zhejiang, manarona faritra iray an'ny 580 kilometatra toradroa.
Ilay farihy nosy arivo dia namboarin'olombelona ary noforonina taorian'ny nananganana ny tohodrano 1959. Raha tsara vintana ianao mandeha amin'ny farihy Qiandao any Shina, hanana fotoana mampihetsi-po ianao mahita ny farihy sy ny valan-javaboary ala.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny farihy Qiandao?
Ny fomba tsara indrindra handehanana mankany amin'ny farihy Qiandao dia amin'ny fiaran-dalamby avy any Hangzhou mankany amin'ny Station Qiandaohu avy eo maka taxi mankany Farihy Qiandao.
10. Toerana epic hitsidika an'i Sina: Tanàna Fahiny Lijiang
Lijiang no tanàna taloha faharoan'ny 10 toerana epic hitsidika ao amin'ny lisitry ny China, ary ny iray amin'ireo 4 tanàna be antitra voatahiry tsara ao Shina. Tempolin'i Lijiang, tsy manam-paharoa ny firafitr'i Naxi an'ny trano misy tafo vita amin'ny taila taloha misy tokontany voafefy, dia fahitana fotsiny.
Rehefa mamakivaky an'i Lijiang ianao cobbled arabe, jiro mena etsy ambony, ary tadiavo ny 354 tetezana, ho gaga ianao ary ho talanjona amin'ny kolotsaina olona Naxi, ary ny maritrano.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny tanàna taloha Fenghuang?
Ny fomba tsara indrindra hahatongavana any Lijiang tanàna taloha dia amin'ny alàlan'ny fandraisana ny Fiaran-dalamby sinoa mankany amin'ny gara Li Li, avy eo amin'ny bus na fiara.
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina ny dianao mankany amin'ireto 10 ankamaroan'ny toerana epic hitsidika an'i Sina amin'ny lamasinina.
Do te hampiditra ny bilaoginay “10 Toerana epic indrindra hitsidihana Any Sina"Eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)